Mpiantsehatra - Lemur Conservation Network
You are here: Home › Mpiantsehatra
Fitaovana entina manentana ho an’ireo mpiantsehara matihanina
Mila miara-miasa isika ho fiarovana ny varika: ireo mpikaroka, ireo mpiantsehatra amin’ny fiarovana, ireo matihanina miasa eny ifotony.
Miankina amin’ny fiaraha-miasa sy ny fizarana ireo fahalalana sy trai-kefa ny fahombiazana amin’ny fiarovana ny varika. Misy fitaovana ireto zaraina ho an’ireo mpiantsehatra sy matihanina, fitaovana entina hanampy amin’ny fikarohana sy ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiantsehatra maro.
IREO FIKAMBANANA AO AMIN’NY IUCN
Io fikambanana io dia tambazotra hivondronan’ireo mpikaroka sy mpiantsehatra amin’ny lafin’ny tontolo iainana sy ny fiarovana ireo karazana primata. Misy rantsana Madagasikara izay mifantoka amin’ny resaka varika.
Tsidio ny tranokala
SOS lemurs dia fandaharan’asa iray mandritra ny 5 taona izay mifantoka amin’ny fametrahana lamin’asa amin’ny tetikasa nosoratana tamin’ny paik’ady ho an’ny fiarovana ny varika. Misy ny SOS Newsletter izay mizara vaovao momba izany.
Misy ny atao hoe “Lisitra mena” izay novokoran’ny IUCN ho an’ireo karazana zava-manan’aina ahiana ho lany tamingana. Io lisitra io no ahafahana mamantatra ireo karazana zava manan’aina tokony ho laharampamehana ny fiarovana azy.
Ity “Primate watching” ity dia nalaina avy amin’ilay fomba fizahan-tany iray mijery manokana ireo vorona atao ahoe “Bird watching” izay nahazoana vola dolara antapitrisany maro. Novolavolain’ireo mpikambana IUCN/SSC Specialist Group ny “Primate watching” mba toy izany ihany koa ny fizahan-tany hijerena manokana ireo Primata.
Madagascar Lemurs Atlas
Ity boky ity indray kosa dia angon- tserasera anisan’ny lehibe indrindra izay hita mivantana eto amin’ny aterineto izay ahitana ny mikasika ny gidro/varika rehetra izay hita eto Madagasikara.
Raha te ahafantatra manokana momba ny « taxonomy » , ny fitiliana manokana, ny loza mihatra na mitatao amin’izy ireo, ny fikarohana sy ireo mpikaroka, ireo biby voasambotra, ny fanabeazana sy ny fanairana ireo mponina loharanom-baovao isan-karazany, fahazoan-dalana manao fikarohana sy rohy marosamihafa dia manaova fikarohana miankina amin’ny toerana na taxan’ilay gidro/varika tianao ho fantatra. Ito foto-drafit’asa ito dia notarihin’ny Office National pour l’Environnement ary novatsihan’ny JRS Biodiversity Foundation vola.
GAZETY SY BOKY TATITRA
Varika eto Madagasikara: Drafitr’asa sy paik’ady entina hiarovona ny varika 2013–2016 (boky amin’ny teny Angilisy)
Nisy ny drafitr’asa iray entina iarovana ny varika atao hoe « Lemur Action Plan » izay nivoaka ny 21 Febroary 2014 lasa teo tao amin’ny gazety « Journal science ». Ity drafitr’asa ity dia vokatra iray azo avy amin’ny atrik’asa « Lemur Red-Listing and Conservation Planning workshop » izay nokarakarain’ny IUCN-SSC Primate specialist Group ny faha 9-14 volana Jolay 2012. Natao tao Antananarivo io atrik’asa io ary natrehan’ireo manam-pahaizana manokana momba ny varika efa mihoatra ny 60 isa , ary ny 40 amin’izy ireo dia avy eto Madagasikara avokoa.
Toro-lalana ho an’ny fangalana sary ireo biby Primata
Ilaina ny fangalana sary na horonan-tsary an’ireo biby Primata satria fitaovana iray ireny entina hanentanana ny olona ho an’ny fiarovana azy ireo. Saingy raha tsy fantatra mazava ny toerana sy ny antony nangalana ny sary dia matetika hafa ny fandraisan’ireo mpijery ny sary. Noho izany, dia misy toro-lalana manokana ho an’ny fangalana ireo sary mba hampazava ny anton’izy ireny.
Jereo eto ny toro-lalana amin’ny teny Malagasy (https://human-primate-interactions.org/wp-content/uploads/2021/03/HPI-Imagery-Guidelines-Malagasy.pdf)
Lemur News dia gazety mivoaka isan-taona izay antontan’ny ampahany mpikaroka Malagasy amin’ilay IUCN SSC Primate Specialists Group. Mamoaka voka-pikarohana momba ny varika, ny fomba fiainany, ny tsindry mahazo azy sy ireo fikarohana mifandraika amin’ny fiarovana ny varika sy ny ala fonenany.
Ny Madagascar Conservation & Development dia gazety iray mamoaka ireo voka-pikarohana mikasika an’i Madagasikara sy ranomasim-be Indianina mifantaoka amin’ny resaka fiarovana ireo harena voajanahary.
Ny Madagascar Lemurs Portal dia tranonkala iray ahafahana mamantatra ireo karazana varika, ny toerana misy azy, ny tsindry mahazo azy sy maro hafa momba azy ireo.
Ny Global Forest Watch dia tranonkala iray ahafahana manaraha-maso ny fitomboan’ny ala, na ny fihenany na ihany koa ireo tsindry toy ny fandalovan’ny afo. Azo jerena ao anatin’io tranonkala io ny fitomboan’ny ala eto Madagasikara.
IREO FIKAMBANANA MIZARA TRAI-KEFA
Ikala STEM dia fikambanana mampivondrona ireo vehivavy siantifika Malagasy mianatra na miasa momba ny taranja STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Ikala STEM dia manome sehatra betsaka ho an’ny fanofanana sy fizarana trai-kefa ho an’ireo mpianatra, mpikaroka sy mpiasa amin’ny lafiny fiarovana ny harena voajanahary. Maro ireo mpikambana Ikala STEM no mianatra sy mikaroka momban’ny varika.
GEOLOGICAL SOCIETY OF MADAGASCAR
Ny Geological Society of Madagascar dia fikambanana iray mampivondrona ireo mpianatra sy mpikaroka momba ny tany. Mizara trai-kefa marobe sy manantanteraka fanofanana izy ireo.